Shirkadaha Isgaarsiinta Dalka oo Markii Ugu Horreysay Hoos Imaanaya Nidaam Dowladeed
Golaha Shacabka ayaa todobaadkii lasoo dhaafay ansixiyay hindise-sharciyeedka isgaarsiinta dalka oo baarlamaanka looga fadhiyay ansixintiisa. Waxuuna hadda sugayaa ansixinta golaha Aqalka Sare iyo saxiixa Madaxweynaha, iyadoo Madaxweyne Farmaajo uu ballan qaaday in uu sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixin doono haddii golaha Aqalka Sare ay kasoo gudubto.
Baanka Adduunka, Madaxweyne Farmaajo, Wasiir Cabdi Canshuur, Wasiir Bayle iyo madax kale ayaa tallaabo horay loo qaaday ku tilmaamay ansixinta golaha shacabka ay ansixiyeen sharciga isgaarsiinta.
Maxey Ka Dhigantahay Arrintaasi?
Shirkadaha isgaarsiinta ayaa markii ugu horreysay hoos imaanaya nidaam dowli ah oo mideysan tan iyo sanadkii 1991’kii.
Ansixinta sharciga isgaarsiinta waxuu dowladda siinayaa awood ay ku maamusho isgaarsiinta dalka sidoo kalena ay ka hesho daqli fara-badan oo dowladda ka xayirnaa.
Sidoo kale sharciga isgaarsiinta dalka waxuu meesha ka saarayaa hanaankii madaxa-banaanaa ee kali ismaamulka ahaa ee shirkadaha isgaarsiinta Soomaalida ay ku dhaqmayeen wixii ka dambeeyay 1991’kii.
Waxuu awood u siinayaa dowladda in ay la socoto dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee sharci daradaha ah ee dalka ka dhaca.
Ansixinta sharciga isgaaarsiinta waxuu shaqo adag u dirayaa Wasaaradda Boostada, Tiknoolojiyada & Isgaarsiinta oo ku andacooneysay in Wasaaradda aanay awood u laheyn in ay dib usoo celiso furaha 252 iyo sumadda dotSO (domain-ka dalka) iyadoo aan la ansixin sharciga isgaarsiinta.
“+252 Thailand ayaa laga isticmaalaa, Philippine ayaa laga isticmaalaa, waxaan muhiim ah in sharciyada (isgaarsiinta) la meel mariyo si waxyaabahaas loo joojiyo” ayuu yiri Wasiir Canshuur.
Wasiirka oo horay uga hadlay faaidooyinka iyo muhimada uu leeyahay ansixinta sharciga ayaa tilmaamay in sharciga uu ganacastada, dadweynaha iyo dowladaba uu siin doono xuquuqdooda:
“Xeerka Isgaarsiinta Qaranka ee hor yaalla Golaha Shacabka waxaa loogu talo galay inuu difaaco xuquuqda shirkadaha iyo dadweynaha intaba waxa uuna muhiim u yahay horumarinta Isgaarsiinta dalka, haddii sharcigaas uu meel marana waxaa billaaban doona isla-xisaabtan iyo horumarin’”ayuu yiri Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolojiyada Soomaaliya, Eng Cabdi Canshuur Xasan.
Hadaba Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta waxaa looga fadhiyaa maamulidda iyo soocelinta hantida Qaranka oo furaha 252 iyo domain-ka dalka ay ugu horreeyaan.
Saameynta Dakhliga Dowladda Ay Ku Yeelaneyso
Wasiirka Maaliyadda, Dr Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo Miisaaniyadda 2017 baarlamaanka ka hor jeediyay ayaa ka dhawaajiyay in dowladda ay shirkadaha isgaarsiinta ka heli karto $100 milyan haddii la ansixiyo sharciga isgaarsiinta.
Waqti xaadirkan shirkadaha isgaarsiinta waxa ay bixiyaan $4.8 million sanadkiiba, waana lacag canshuur ah oo ay iyaga iyo dowladda isla garteen in ay bixiyaan.
Baanka Adduunka oo todobaadkii lasoo soo bandhigay warbixin ku saabsan dhaqaalaha Soomaaliya ayaa Dowladda usoo jeediyay in ay canshuur gaareysa 5%-10% saaraan lacagaha kaararka ku hadalka taleefonada ama Landline-ka.
Miisaaniyadda 2017, waxaa la qoondeeyay in 15% canshuur-iib (sales tax) ahaan looga qaado shirkadaha isgaarsiinta.